Janaayo 5 , 2021
Khamiista kasta, Janie Norby fasalka koowaad wuxuu ku biiraa fasalkeeda Google Meet 12-ka - mana ahan cashar ama waxqabad manaahij ah, laakiin wuxuu Norby ugu yeeraa "Qadada Qadada." Kulankan qaaska ah waxaa lagu marti galiyay miiska jikada ee Norby halkii laga dhigi lahaa xafiiska gurigeeda, halkaas oo ay wax ku barato inta ka hartay maalinta. Norby wuxuu yidhi "waa waqtigii aanu wada cunayn lahayn ... isku abuuri lahayn."
"Qadada Qadada, [ardayda] waxay is waydiiyaan su'aalo oo aniga ayay i waydiiyaan. Ardaydu way wadaagaan waxay cunayaan maalintaas ... waxayna ka sheekaystaan wixii ay doonaan." Cunto dhowaan, ardaydu waxay keeneen kaftan si ay ula wadaagaan oo waqtiga oo dhan kuqaadeen qosol, Norby ayaa dib uxasuustay.
"Marwalba waxaan la imaadaa su'aal deg deg ah ama labo diyaar ah, laakiin marnaba uma baahni inaan isticmaalo," ayay tiri. "Waxay ku xirmayaan midba midka kale heer bulsho. Ma jiro qof iyaga u soo bandhigaya qadada qadada. Waxay kaliya ku xirmaan midba midka kale."
Kahor intaanan aqbalin doorka macalinka elektaroonigga deyrta, Norby wuxuu 12 sano u ahaa macallin keyd u ah Dugsiyada Minnetonka. "Ma aanan hubin waxa aan markii ugu horraysay iska qorayay, oo ay la socoto qaybta teknolojiyadda oo dhan," ayay tiri markii ay xusuusatay bilowgii sanadka.
Barashada isticmaalka barnaamijyada iyo aaladaha cusub ee qayb ka ah fasalkeeda internetka ayaa ahayd isbedel wanaagsan, Norby ayaa la wadaagtay, laakiin waxay si dhakhso leh u ogaatay in xirfadaheeda farsamo aysan ahayn qaybta ugu muhiimsan ee waxbarista jawiga elektaroonigga ah.
"Carruurtu kama walwalayaan quruxda barnaamijyadayda Google, laakiin waxay ku saabsan yihiin isku xirnaanshaha aniga iyo midba midka kale," ayuu yiri Norby. "Taasi waxay ahayd laambaddayda. Waxaan is iri [naftayda], 'Janie, bilow qorshaynta qaabab ay carruurtan ku xidhi karaan. Waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto carruurtan sida ugu macquulsan!"
Norby waxay bilawday inay ka fikiriso qaababka ay ku kobcin karto cilaaqaadka ay la leedahay ardaydeeda wixii ka dambeeya maalin dugsiyeedkooda caadiga ah. Marka laga soo tago martigelinta tooska ah ee loo yaqaan 'Google Meets for Qado Bunch', waxay la timid fikrad kale: Marwo Norby Sheekooyinkeeda Jiifka. Norby waxay bilawday inay iska duubto aqrinta buugaagta caruurta waxayna la wadaagtay fiidiyowyada qoysaska si ay ugu ciyaaraan ardayda fiidkii.
“Akhrinta sheekooyinka wakhtiga sariirta waa hab kale oo ardeyda u maqli karaan codkeyga una arki karaan wejigeyga qeyb ka mid ah maalintooda” ayuu yiri Norby. Waxay sheegtay in jawaabta laga duubay fiidiyowyadeeda ay ahayd mid aad u wanaagsan, iyadoo ardayda ay u direen farriimaheeda si ay ugu mahadceliyaan akhriska ay u sameysay "Had iyo jeer waxaan ku dhammeeyaa fiidiyowyada anigoo leh, 'Riyooyin Macaan!' ardayduna dib ayey ii soo qoreen iyagoo leh 'Riyooyin Macaan, Marwo Norby!'
Norby iyo ardaydeeda waxay tixraacaan fasalkooda "qoyskooda fasalka."
Qoysasku way isla cunayaan, way isla hadlaan oo waxay isla wadaagaan waxa maskaxdooda ku jira, ayuu yidhi Norby. "Marka, fasalkeena, wax badan ayaan ka qabanaa taas."
Adoo cusbooneysiinaya habab cusub oo lagu kobciyo isku xirnaanta, macallimiinta iyo ardayda waxay abuuraan bey'ad ay ka tirsan yihiin fasaladooda. Dugsiyada Minnetonka waxay ku faaneen siyaabaha ay macallimiinteena, ardaydeena iyo qoysaskeennu uga gudbeen kana sii gudbeen sannadkan dhisidda beesheena.
Barnaamijka Capstone wuxuu siiyaa MHS Waayeelka Khibrada Dunida dhabta ah
Guga kasta, waayeelka MHS waxay fursad u leeyihiin inay kaqeybqaataan Capstone: labo usbuuc, khibrad ka baxsan xerada oo ay ku sii wadi karaan tababar shaqo, mashruuc adeeg ama daraasad madaxbanaan.
Janie Norby sheekooyinka habeenka ee sariirta iyo toddobaadlaha ah "Qadada Qadada" waxay siisaa ardayda fasalka koowaad daqiiqado ay ku xirmaan "qoys fasal ah."
Minnetonka Magacyada Ruux Fudud ee Abaal-marinta Bulshada
Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka waxay ku faraxsan yihiin inay ku dhawaaqaan kuwa ku guuleysta abaalmarinta abaalmarinta bulshada ee degmada ee '2020-21 Prudential Spirit of Community'. Waad ku mahadsan tahay inaad ka dhigtay bulshadayada meel wanaagsan adoo u adeegaya wanaagga weyn!
MMW Fasalka 7aad Oo Lagu Soo Bandhigay Ficil ahaan "Clouds Choir for A sabab"
"Barnaamijkeenna choral-ka wuxuu caddeeyay adkeysigiisa. Ka-qayb-qaadashada dhacdadan waxay aniga iyo ardaydaydaba fursad u siisay inaan mar kale u wada heesno koox weyn - ku dhowaad," ayay tiri macallimiinta koox-kooxeedka Jena Menke.
Xaflada Layaabka Virtual wuxuu u dabaaldegayaa sanad guurada Transp Springs ee ardayga
Ardayda dhigata fasalka afaraad waxay ka yaabeen saaxiibkood isku fasal xaflad macmal ah, oo ay ku dhan yihiin funaanado isku mid ah iyo cunno fudud oo ay jecel yihiin, si loogu dabaaldego taariikh muhiim u ah isaga iyo qoyskiisa.
Ardayda MME iyo MMW waxay eegaan inay Bartaan Saldhigga Caalamiga ah ee Hawada
Shaqada ardayda waxay weydiisaneysaa inaysan raadsan oo keliya saldhigga, laakiin inay qiyaasaan waxa cirbixiyeennada ISS ay sameynayaan xilligan ay ilaalinayaan ISS.
Laba Qalinjabiyeyaal MHS Ah Oo Loogu Magacdaray Aqoonyahanada Shaambadaha
Horaantii sanadkan, Qalinjabiyeyaasha Dugsiga Sare ee Minnetonka Julia Ruelle '20 iyo Skyler Seets '20, ayaa loogu magac daray Stamps Scholars jaamacadaha ay hadda dhigtaan. Abaalmarinta ayaa lagu aqoonsan yahay guul gaar ahaaneed oo xagga tacliinta ah, karti hoggaamineed, iyo dabeecad.